GOGOL-XAJINTA XAYNDAABKAAGA KU YAALA: XEERARKA BEERITAANKA IYO DARYEELIDDA CAWSKA TARRAGONKA - SOOSAARKA DALAGGA
Tarragon - geedka dilka ah, mid ka mid ah noocyada dixiriga.
Ma taqaanaa? Tani waa noocyada kali-geedka ee kaliya ee aan haysan sifooyin qoto-gashan oo dhirtaas ah.
Heerkuna wuxuu ku kori karaa ilaa hal mitir iyo badh, caleemuhu waa cidhiidhi yihiin, caleemaha cagaarka ahna waa cagaaran-cagaaran, nooca barafka-cad, oo ku yaalla meelaha ugu yaryar. Dhirta tarragon (tarragon) waa xawaash la yaqaan, iyo beerashada waa mid caan ku ah dhaqanka beerta.
Sidoo kale, warshadkan waxaa loo isticmaalaa ilaalinta khudaarta iyo diyaarinta marinades. Tarhun waxay u keentay caraf udgoon oo aan caadi ahayn sababtoo ah saliidaha lagama maarmaanka ah ee caleemaha iyo jirridda dhirta.
Ma taqaanaa? Warshadani waa saldhigga cabitaanka caanaha "Estragon".
Abuuritaanka iyo dhalmo-abuurka tarragon
Geedka abuurka tarragon - geedi socod badan oo waqti badan ka badan hababka kale, laakiin haddii ay jiraan xaalado kala duwan habab kale oo aan ku habboonayn, ka dibna aan ogaanno sida loo beero tarragon sidan. Seeds waxaa lagu beeray karaa furan si toos ah beerta, oo aad horey u guntan karaa geedo. Habka labaad ayaa ah mid aad u adag, laakiin waa la isku halleyn karaa.
Geedka geedaha tarragonka
Abuurka Tarragon waa yar yihiin, waxay ku dhalan doonaan 2-3 toddobaad. Ma aha lagama maarmaan in la rusheeyo dhulka, ku beeri habka caadiga ah, oo leh masaafada u dhaxaysa safarka ku dhow 10 cm Abriil-May waa waqtiga ugu wanaagsan marka aad dhirta beerto on geedo.
Dhowr usbuuc ka dib, abuurka biqilaa, geedo u baahan yahay in la qalajiyo oo isku xigta 10 cm. Daryeel dheeraad ah waxaa ka mid ah waraabinta, dabacsanaan, jaridda dhirta. Sababta taranka, dhirtu waxay ku jirtaa hal jiilaal. Guga hore, waxaa lagu wareeri karaa dhulka u furan.
Geedka abuurka tarragon ee dhul furan
Ma jiro farqi aad u farabadan oo lagu beeray tarragon, si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah weedheyaal aan loo baahnayn ayaa lagu kala saari karaa Artichoke Yeruusaalem, hilibka iyo lettuce. Haddii ay jirto doorasho, beerashada tarragonka laga bilaabo abuurka ayaa ka wanaagsan in la soo saaro meelaha meelaha horay loo soo saaro.
Daaridda waxaa la samayn karaa labadaba xilliga gu'ga iyo dayrta, hoos barafka. Abuurka yar yar waxaa lagu beeray saf ah ka dib 30 cm oo daboolay lakabka yar ee dhulka, ma iloobin inay qoyaan beerto. Geedo ayaa soo muuqan doona 2-3 toddobaad, iyada oo ay waqti u baahan yihiin in la soo saaro.
Hababka kale ee cawska tarragonka
Waxaa jira siyaabo kale ee tarragon taranta, laakiin taasi waxaad u baahan tahay warshad qaangaar ah.
Qayb ka mid ah rhizome
Habka ugu fudud: dhirta qaangaarka ah waa la qodayaa oo kala qaybsan, ka dibna lagu beeray meelo cusub. Qayb kasta oo ka mid ah waa in ay leedahay midabkiisa gaarka ah iyo laba-buro.
Soo saarida tarragonka ayaa ugu haboon haddii aad u baahan tahay inaad hesho tiro badan oo dhirta cusub ah. Iyada oo hal baadiyaha qaangaarka ah waxaad heli kartaa 60-80 gooyn.
Maraynta ayaa sida ugu wanaagsan loo sameeyaa inta lagu jiro xilliga koritaanka firfircoon, sidaas darteed rooting ayaa u dhici doona dhakhso. Wixii tarragon waa guga ama xagaaga hore. Gooyn waa la gooyaa 10-15 cm dheer, ka dibna lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo oo leh ciidda ciidda ee humus iyo ciid.
Waa muhiim! Gooyn waxay u baahan yihiin si qoto dheer u ciidda oo aan ka badnayn 5 cm, ka dibna daboolo oo ruxin.
Taas ka dib, waa in si joogta ah loo duubaa oo loo waraabiyaa, heerkulka waa in lagu hayaa 18 darajo. Haddii wax walba si sax ah loo sameeyo, gooyntu waxay diyaar u noqon doontaa in lagu beero saddex toddobaad gudahood.
Ma aha mid aad u caan ah, laakiin hab wax ku ool ah - dhalmo iyadoo la isticmaalayo qeybaha rhizomes. Guga hore, rhizomes ayaa qoday oo jarjarey qiyaastii 5 cm dhererka. Dheeraad ah, nidaamku wuxuu isku mid yahay sidii markii lagu koray gooynta.
Sida loo daryeelo tarragon goobtaada
Daryeelka ugu muhiimsan ee tarragonku waa inuu soo saaro haramaha, kabacdi carrada iyo waraabinta wakhtiga ah, gaar ahaan xilliga abaarta. Caleemaha dhalinyarada waa in lagu xiraa jeexjeexyada, dabaylaha xooggan ay u dhaawici karaan.
Horeba laga bilaabo sanadka labaad waa suurad wacan si ay u quudiyaan geedka. Waxaa ugu fiican in la sameeyo tan guga, iyada oo la isticmaalayo Bacriminta macdanta adag ee heerka 1 qaado oo halkii mitir labajibbaaran.
Ururinta iyo diyaarinta cawska tarragon ee jiilaalka
Estragon waxaa loo isticmaalaa raashin badan, labadaba foomka cusub iyo kuwa la qalajiyey. Sidoo kale waa la kariyey, la qaboojiyey. Dabcan, qof walba wuu ogyahay cabitaanka, kaas oo leh magac isku mid ah. Si kastaba ha ahaatee, ururinta ma aha suurtogalnimada jiilaalka, sidaas darteed, waa lagama maarmaan in la diyaariyo tarragon jiilaalka.
Wixii qalajin dheeraad ah, tarragon waa la jaraa bilowga hore ee ubax. Biyaha ku jira waa yar yahay, sidaas darteed qalajinta ma qaadan waqti badan. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu xiro alaabta ceeriin ah oo hoos u dhacda meel qallalan oo hawo leh. Ka dib markaad qallajiso ka dib, xawaashka basbaaska leh waa in lagu duubaa weelasha hawada si ay carafku u baaba'do.
Cawska waa in la maydiyaa, wax yar ku qallaji shukumaan. Si sahlanaato, waxaad u kala jajabin kartaa qaybaha oo ku duubi kartaa bacaha ama foorno fiiqan (cufnaanta iyo xitaa si adag, si ka fiican). Daahdo.
Sida kiisaska qaboojinta, cagaarka waa in la dhaqaa oo la qalajiyaa. Marka xigta, jarjar alaabta ceeriin, ka dibna ku dar cusbo. Qaybta waa in ay ahaataa 5: 1, inkastoo ay muhiim tahay in aan la dhaafin - cawska ayaa loo baahan yahay in la isku qasan, oo aan la qaloocin.
Kadibna si adag ugu dhuujin weel, ku xir daboolka nacon oo ka tag meel qabow ilaa aad u baahato.
Hadda wax qarsoodi ah maaha sidii aad u kori lahayd tarragon dacha oo aad ku raaxaysato dhadhanka sanadka oo idil.